Real Madrid Oo Ku Guuleysatay Koobkeedii 11aad Ee Champions League
shiiqa May 28, 2016 No Comments
Waxaa dhacday Cayaar aad iyo aad u xiiso badan oo leysla dhaafi waayay bar bar dhac 1 iyo 1 ah,tasoo ahey finalka Champions League oo dhex martay kooxaha, reer Spain ee ka wada dhisan caasimada Madrid, waa Real Madris VS Athletic Mdrid.
Ciyaartaas ayaa ka dhacday garoonka kooxda Milano ee Sansiro. Ugu danbeyntii kooxda Real madrid ayaa ku guuleysatay koobkeedi 11aad ee Champions League, kadib markii rigoorayaal 5-3ay kaga badiyeen kooxda Athlitic Madrid.
Cayaaryahan Juan Fran ayaa ka qasaariyay rigoorada kooxda Athlitic Madrid halka rigoorada guusha uu Real Madrid u dhaliyay laacibkooda reer Portugal ee Cristiano Ronaldo.
Daqiiqadii 15aad ayay kooxda Real Madrid hogaanka qabatay, kadib laad xor ah uu usoo qaaday Toni Kros uu madaxana kusii taabtay Greth Bale halka Sergio Rmos uu kubada ka hoos bixiyay goolhaye Jon Oblack inkastoo uu ahaa gool muran badan dhaliyay,laakin garsooraha ayaa sheegay ii uu sax yahay.
Halka Ramosna uu noqday difaacii ugu horeeyay ee labo final Champions League gool ka dhaliay, Finalkii 2014 isla kooxdan Athletic Madrid ayuu shabaqa kasoo taabtay.